Is’Art galerie : hanolotra seho rap hafa mihitsy | NewsMada
Is’Art galerie : hanolotra seho rap hafa mihitsy
Maromaro ireo mpanao mozika rap efa nifanesy niaka-tsehatra, tao amin’ny Is’Art galerie etsy Ampasanimalo. Amin’ity indray mitoraka ity, izany hoe, rahariva manomboka amin’ny 7 ora, hanolotra mpanakanto manana fomba fijery sy fiaina hafa mihitsy ny foibe. Tsy iza izany fa i Buddah El Taga.
Ramanantsoa Ando Arliva ny tena anarany, saingy i Buddah El Taga kosa amin’ny maha mpanao rap azy. Miavaka avy hatrany ny lehilahy, na tamin’ny fisafidianana io anarana io aza. Safidy tsy kisendrasendra fa maneho mivantana ny fironany eo amin’ny finoana sy ny fitsipi-piaina. Tsy inona izany fa ny bodisma.
Eo amin’ny tontolon’ny rap kosa, mampisongadina azy ny fampifangaroana ny rap amin’ny mozika hafa, toy ny “soft”, “hardcore” ary ny “horrocore”, izay samy karazana mozika rap efa malaza sy mampalaza mpanakanto maro any ivelany any. Tsiahivina fa ao anatin’ny tarika OTF na Olon’ny tena fanahy, izay ao anatin’ny vondrona Tangala, ny lehilahy.
Ho an’ny mpankafy an’i Buddah El Taga, inoana fa hahaliana izao fihaonana indray amin’ity mpanakanto ity izao. Tsy fandre ny fiakarany an-tsehatra matetika. Ho an’ny hafa kosa, manatevina ny fahalalana sy ny kolontsaina ny famantarana mozika hafa, ankoatra ny fandre sy fahita mahazatra.